के तपाई खुट्टाको कुर्कुच्चा फुट्ने समस्याबाट पिडित हुनुहुन्छ ? त्यसो भए यसरी छुट्कारा पाउँनुहोस् « Light Nepal
के तपाई खुट्टाको कुर्कुच्चा फुट्ने समस्याबाट पिडित हुनुहुन्छ ? त्यसो भए यसरी छुट्कारा पाउँनुहोस्
Published On : 13 January, 2019 6:36 am
काठमाडौं, २९ पुस । धेरै मानिसहरु कुर्कुच्चा फुट्ने समस्याबाट ग्रसित छन् । कुर्कुच्चा फुटेको ठाउँमा लगाउने धेरै प्रकारको औषधी भए पनि कतिलाई त त्यो औषधीले काम नै गरेको हुँदैन । अझ यो जाडो महिनामा त झन् धेरै कुर्कुच्चा फुट्ने समस्या हुन्छ । कुर्कुच्चा फुट्दा हाम्रो सौन्दर्यमा पनि ह्रास आउँछ । यस्ता केही घरेलु उपायहरु छन् जस्ले कुर्कुच्चा फुट्ने समस्याबाट छुटकारा दिन मदत गर्दछ ।
बेकिङ्ग सोडा: फुटेको कुर्कुच्चालाई निको पार्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको ‘मनतातो पानीले भिजाउनु’ नै हो। यसले कडा छालाई नरम बनाई निको हुन मद्दत गर्दछ। साथै १ गिलास मनतातो पानीमा ३ चम्चा बेकिङ्ग सोडा मिसाएर पनि कुर्कुच्चालाई त्यसमा डुबाउन सक्नुहुन्छ।
चिनी: आधा गिलास चिनी एउटा भाँडामा राख्नुहोस्। त्यसमा चिनीको आधा भागजति मनतातो पानी अथवा ग्लिसिरिन अथवा नरीवलको तेल राखेर घोल्नुहोस् र बाक्लो लेदो बनाउनुहोस्। यस मिश्रणमा पुदिना पनि मिसाउन सक्नुहुन्छ। यस मिश्रणलाई क्यालस लागेको कुर्कुच्चा अथवा फुटेको छालामा दैनिक लगाउँदा छालालाई नरम बनाउनको साथै सफा पनि बनाउँदछ।
भुइँकटहर: भुइँकटहर तास्ने बित्तिकै त्यसको बोक्राले फुटेको छाला अथवा कुर्कुच्चालाई पूर्ण रूपमा ढाक्नुहोस् र नरम कपडाले बाँधिदिनुहोस्। केहि घण्टा पश्चात त्यसलाई परिवर्तन गर्नुहोस् र १ हप्तासम्म दैनिक यसो गर्नाले भुइँकटहरको बोक्रामा हुने इन्जाइम र एसिडले फुटेको ठाउँलाई निको बनाउँदछ।
वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालले सुरु गर्‍यो निशुल्क बस सेवा, यस्तो छ रुट
काठमाडौं, फागुन २८ । वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालले औषधि उपचारका लागि आउने बिरामीहरुका लागि निशुल्क बस